Nyochaa: "Onye Nnọchiteanya Nchebe", nke James Nava | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Nyochaa: "Onye Echebe Echedoro", nke James Nava dere
Eva Maria Rodriguez | | Akwụkwọ
Onye ọrụ nchebe, na James nava, Ọ bụ akwụkwọ ọhụụ na-atọ ụtọ, nke anyị nwere ike ịchọta ụdị dị iche iche dị n'otu na akụkọ dị ugbu a. Akwụkwọ akụkọ a bụ ọdịda anyanwụ nke oge a na-agwakọta ihe na-atọ ụtọ, aghụghọ, nledo, ihe ngosi na ụdị dị ọcha nke akwụkwọ ịhụnanya na ọbụlagodi echiche efu.
Akwụkwọ akụkọ ahụ na-akọwa akụkọ banyere onye ọrụ CIA zoro n'otu ebe a na-azụ nri na Montana, n'akụkụ Osimiri Rocky. Anụ ọhịa wolf na akụkọ mgbe ochie ndị India bụ akụ ndị Nava ji eme ihe iji nye ya ohere ahụ dị egwu na-egosipụta akụkọ ahụ. Ruo ugbu a, ọ ga-echetara gị ọtụtụ akwụkwọ Nava ọzọ nke m tụlere ọnwa ole na ole gara aga, Grey Wolf. Ma akụkọ ihe mere eme enweghị ihe jikọrọ ya na ya. N'ezie, mgbe Sniper Books zitere m ya, m ga-echere ka m gụọ ya, ebe ọ bụ na akara m nwere na ya Grey Wolf o gbochiri m ịgụ aha ọhụrụ a n’echetaghị nke ọzọ. Otú ọ dị, akụkọ ahụ dị nnọọ iche, n'ụzọ niile. N'okpuru m ga-agwa gị ntakịrị banyere akụkọ a dị egwu, juputara na arụmọrụ, kamakwa nke uche na ezigbo uto.
Onye ọrụ nchebe David Crow na-akọ akụkọ banyere onye ọrụ CIA na-agbaba na anụ ụlọ na Montana, ebe ọ na-aga ọrụ dị ka onye na-egwu egwu. David, otu n'ime ndị ọrụ CIA kachasị mma n'oge a, na-ezobe onwe ya site na ịgbanahụ fatwa nke otu ndị jihadist bidoro ya.
Na mbu ihe niile na-aga nke ọma, mana mgbe ekpuchidere mkpuchi ya, ndị CIA na-atụ aro ka Crow bụrụ aghụghọ nke ọnyà ọnwụ iji kwụsị ndị na-eyi ọha egwu, ndị na-elekwasị anya ọ bụghị naanị ndị ọrụ nchekwa ahụ, mana ole na ole ndị ọzọ.
N'ime ihe ndị a niile, Devid hụrụ ịhụnanya. Mgbe ndị na-eyi ọha egwu chọpụtakwara, ha na-achọta ụzọ zuru oke iji gbadata Ogbe.
Ma Ugo nwere ihe nzuzo, ikike nke ọ na-atụghị anya ya. N'ụzọ ụfọdụ, onye protagonist anyị jisiri ike hụ ihe ga - eme, n'ihi mmekọrịta pụrụ iche o nwere n'etiti anụ ọhịa wolf.
Akụkọ a juputara na nkọwa dị mma, nke Nava na-eme ka agụụ niile ọ na-enwe maka ala Montana pụta, yana mmasi ọ na-ekwupụta maka anụ ọhịa wolf. Anyị ahụworị ya na Grey Wolf, ma nke ahụ akwụsịghị iju anyị anya. Isi okwu efu nke tinyere na anụ ọhịa wolf na-arụ na akụkọ a bụ ihe mbụ, a na-emeso ya n'ụzọ ị nwere ike ikwenye na ya.
Akụkọ ahụ ji nwayọọ nwayọọ malite. Nava na-enwe obi uto igosi anyi gburugburu ebe obibi, na ime ka ndi mmadu na ndi mmadu mara ya, omenala, ihe omume, mmekorita onwe onye. Akụkụ mbụ nke akwụkwọ a bụ akụkụ nke anụrị.
Agbanyeghị, ka akụkọ a na-aga n’ihu, mgbe emereme ahụ bidoro, akụkọ a na - agbakarị ngwa ngwa ma dịkwa ike karịa, juputara na mmụọ, yana mpekere nke oke ime ihe ike, mana ejiri ezigbo uto mesoo ya, ebe Nava wepụtara akụkụ agha ya kachasị.
Ejiri iji asụsụ gimmicky mara ụdị ejiji Nava, ọ bụ "American", ọ bụrụ na m ga-ekwu ya. Ọ na-enwe mmasị ịbanye na nkọwa, gosi mmeghachi omume na mmetụta nke ndị odide ahụ. Na mgbakwunye, asụsụ ha kwụ ọtọ ma doo anya, akụkọ dịkwa mfe ọgụgụ.
Enwere m mmasị na ọgwụgwọ nke njedebe, nke, site na mpempe akwụkwọ dị mkpirikpi, akụkọ a na-aga n'ihu na-enye echiche nke onye protagonist na onye na-emegide ya. Nke a na-enye nnukwu omimi banyere akụkọ ahụ, nke na-abanye na mpaghara nke mmụọ, ma na-enye ohere ịkọwa oge nke esemokwu kachasị ukwuu.
Banyere ịgwọ ihe niile metụtara CIA, ebe ọ bụ na ọ mara m ahụ ya na ihe nkiri na ihe onyonyo, ịgụ usoro a, nkọwa nke teknụzụ na ihe ndị ọzọ metụtara ya masịrị m.
Banyere mbipụta ahụ, ekwesịrị ịdeba ama na nke a, dị ka akwụkwọ niile Sniper Books, na-edozi ya n'ụzọ zuru oke, yana akụrụngwa dị elu. Ihe mkpuchi ahụ, na textures abụọ, na-adọrọ mmasị karịsịa, nwere atụmatụ mara mma na nhụchalụ nke ihe na-atọkarị ụtọ na ọgwụgwọ nke agwa: ihe omimi. Maka na onweghi mgbe Nava mere nkọwa zuru oke banyere agwa a, onye ya na okpu na egbe ya na-esonyere ya (dịka anyị na-ahụ na mkpuchi ahụ). N’ozuzu ya, akwụkwọ ahụ na-arụ ọrụ nke ọma ma na-agụ akwụkwọ nke ọma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Nyochaa: "Onye Echebe Echedoro", nke James Nava dere
Ọ na-ada ụda na-atọ ụtọ.
Reply to vicente lara
Ana m akwado ka ị gụọ ya. Ọ ga-amasị gị. Ọ nwere ọtụtụ ihe. Akwụkwọ James Nava niile na-atọ ụtọ.
Zaghachi Eva Maria Rodriguez
Okwu ndị chepụtara ma ọ bụ mepụta site na ndị edemede
Ndụmọdụ maka ndị edemede sitere na Jorge Luis Borges